Mabasa - Mestech Industrial Limited
Sehunyanzvi hwekugadzira bhizinesi, MESTECH haingopa zvigadzirwa chete, asi zvakare inopa ese-anotenderera ehunyanzvi mhinduro uye masevhisi. Aya masevhisi anosanganisira epurasitiki zvigadzirwa, zvigadzirwa zvehardware dhizaini dhizaini uye kugadzira, zvikamu zvekuumba, post-kugadzirisa, chigadzirwa dhizaini uye gungano, kutumira kunze tsika kuzivisa uye zvimwe zvinhu.
Kugadzira muforoma uye jekiseni kuumbwa
MESTECH ine yakakwana purasitiki muforoma yekugadzira system. Kupfuura mazana maviri emazana maviri epurasitiki muforoma akagadzirwa mugore, uye jekiseni kuumbwa uye post-kugadziriswa kwepurasitiki zvigadzirwa zvakaitwa. Muenzaniso weforoma ndiHASCO, DEM, MISUMI uye CHINA. Kuwedzera kusangana vatengi munzvimbo ino, anoumba edu vari aivigirwa kuna Europe, North America uye Asia uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
Metal zvikamu kugadzira
Simbi dzakasimba dzine hunyoro hwakakwira, kuomarara uye simba, kuitisa, ductility uye simbi inopenya kupfuura zvimwe zvinhu. Nekugadzirisa iko kwemukati kuumbwa uye mamorekuru mamiriro esimbi, isu tinogona kuwana zvivakwa zvakanyanya kupfuura izvo zvepurasitiki nezvimwe zvisina kusimba
Yakanaka simbi alloy uye yakakwira chaiyo zvikamu inogona kuwanikwa. Naizvozvo, zvikamu zvesimbi zvinoshandiswa zvakanyanya mumishini nemidziyo, indasitiri yemakemikari, kubhururuka, muchadenga, kufamba, kutakura, kuvheneka, kurapwa uye magetsi.
Simbi dzinowanzo shandiswa isimbi, aruminiyamu chiwanikwa, zinc chiwanikwa, mhangura, mhangura chiwanikwa uye titanium chiwanikwa. Maitiro ekugadzirisa ezvikamu zvakagadzirwa navo akasiyana nekuda kwenzvimbo dzakasiyana, nziyo uye mashandisiro. Pamusoro pekunyungudika kwesimbi, iwo makuru ekugadzirisa matekinoroji atinoshandisa kuwana saizi yekupedzisira uye chimiro chesimbi ndeichi: kufa kukanda, hupfu sintering uye machining.
Chigadzirwa chakakwana zvirokwazvo chinobva mukugadzirwa kwakanakisa kutanga.
Nekuvandudzwa kwetekinoroji yeInternet uye kubuda kwehunyanzvi hwechigadzirwa, kuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva mumusika wanhasi kunokurumidza uye nekukurumidza. Maitiro ekurega ako zvigadzirwa apinde mumusika mune ipfupi nguva ndiyo kiyi yekukwikwidza kwemabhizinesi. Makambani mazhinji anowanzoisa zviwanikwa zvekunze kuti apedze zvimwe kana zvizhinji zvechigadzirwa dhizaini basa, kuitira kupfupisa iyo kutenderera kwechigadzirwa, uye inotarisisa mashandiro emusika uye zvinhu zvepakati.
Mestech mainjiniya anogona kupa epurasitiki zvikamu, zvigadzirwa zvemidziyo uye chigadzirwa dhizaini dhizaini, kugona kuitisa ongororo, pamwe nekutevera-up muforoma kugadzira, zvikamu zvekugadzira uye yakapedza chigadzirwa gungano masevhisi zvinoenderana nevatengi 'zvigadzirwa zvinodiwa.
Chigadzirwa chitsva kubva pakutanga dhizaini kugadzirwa uye kushambadzira, kazhinji zvinoda kuisa mari zhinji, simba uye nguva. Iko kunaka kwechigadzirwa dhizaini kunoisa zvakananga kubudirira kwechigadzirwa. Prototype inzira yakakosha yekuyedza chigadzirwa dhizaini. Iyo inoshandiswa kutarisa matambudziko aripo mukugadzirwa kwechigadzirwa, kugadzirisa dhizaini, uye kudzivirira zvikanganiso zvakakura zvinotungamira mukurasikirwa kukuru mune inotevera nhanho. Semuenzaniso, pamotokari, ndege, ngarava uye zvigadzirwa zvemagetsi nemagetsi, izvo zvinogara zvichigadzirwa kuti zviongororwe zvisati zvagadzirwa zveforoma nezvidimbu.
Mestech inokwanisa kupa vatengi neCCC, 3D kudhinda epurasitiki zvikamu uye simbi zvikamu pamwe nemaoko akagadzirwa modhi kugadzirwa kweSLA, pamwe nediki batch sampuro yekugadzira.
Kune zviuru zvezvigadzirwa pamusika, izvo zvinogara zvichishandurwa mazuva ese. Makwikwi mumusika ari kuramba achityisa. Makambani anosiyana muhukuru. Makambani mazhinji, akaganhurirwa nechavo bhizinesi chimiro, ivo vanotarisisa pane dhizaini uye kusimudzira kwemusika kana zvigadzirwa zvitsva zvehunyanzvi, uye havamise yavo yega zvigadzirwa zvigadzirwa zvigadzirwa.
Tinogona kupa chigadzirwa chechigadzirwa uye neruzivo rutsigiro kune vakadaro vatengi. Inosanganisira nhevedzano yeimwe-yekumira masevhisi senge chigadzirwa dhizaini, zvikamu zvekugadzira, kutenga uye gungano.
Kupa masevhisi emhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvepurasitiki kuumbwa, simbi kufa-kukanda uye machining ndechimwe chezvinangwa zvikuru zveMESTECH. Nemidziyo yedu yakanaka uye zvivakwa, isu zvakare tine timu yeanenjere vane ruzivo uye tsvimbo dzine hunyanzvi Isu tinovimbisa mhando yezvigadzirwa zvedu nemasevhisi kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwetekinoroji yepamberi nehunyanzvi, pamwe nekuomesa kurongeka uye manejimendi.
Chigadzirwa kugadzira chinogara chiine dzakateedzana dzakabatana macheni. Kuti tigone kuzadzikisa zvido zvevatengi zvinokudziridzwa, tinopa masevhizheni kubva kune yekutanga dhizaini, kusimudzira, kugadzira kugungano rezvigadzirwa. Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve yega yega pazasi kana neimwe nzira, taura nesu kuti titaure zvaunoda.